MPAMPIANATRA MITOKONA: Any amin’ny Mailhol ny vahaolana maharitra
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire juil 25, 2018
Manohana an’i Pasitera Mailhol, kandidà ho filohampirenena ny fikambanana S.A.I.N.A (Solidarité et Action des Intellectuels pour Notre Avenir), sampana fanabeazana. Nisafidy manokana azy ny fikambanana satria afaka hanome vahaolana maharitra manoloana ny olan’ny mpanabe ankehitriny sy ny fanabeazana. « Taorian’ny zaika be izay notanterahinay ny 23 jolay 2018 dia nanapa-kevitra ny fikambanana fa hanolotra an’i Pasitera Mailhol Christian Dieu Donné ho kandidà amin’ny fifidianana filohampirenena. Tamin’ny taona 2000 ny fikambanana no niforona. Ireo mpampianatra niofana teny « école normale supérieur » (ENS) no mivondrona ao », hoy ny Filoha Nasionalin’ny S.A.I.N.A, Rakotondramanana Tina Josoa.
Raha hazavaina amin’ny teny Malagasy ny anaran’ny fikambanana dia sehatra sy asa hifanankalozan’ny avaram-pianarana. Ao anatin’ny vinan’ny fikambanana ny hamahana ny olan’ny mpanabe sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Anisan’izany ny fananganana tahirim-bola ho an’ny fanabeazana, ny banky fampandrosoana ho an’ny fanabeazana na BFF. Araka ny fanazavana nomen’ny filoha nasionalin’ny S.A.I.N.A hatrany fa raha hangalàna 10 Ariary avy ny entana avy ivelany izay miditra eto an-toerana dia hanampy betsaka ny sehatry ny fanabeazana. Hampidirina ao amin’ny tahirim-bola izay vola azo avy amin’izany. Raha lany soamantsara ny kandidà tohanan’ny S.A.I.N.A dia hatsangana ny BFF. Enina tapitrisa ny isan’ny zaza Malagasy mianatra any amin’ny ambaratonga voalohany, hoy i Rakotondramanana Tina Josoa. Raha mametra-bola 5000 Ariary isan-taona ao amin’ny BFF fotsiny ny zaza tsirairay dia efa ampy hanomanan’izy ireo ny famaranana ny fianarany eny amin’ny ambaratonga ambony ny vola voaangona. Nilaza ihany koa Pasitera Mailhol fa raha tsy tafiditra amin’ny tetibolam-panjakana 2019 ny famaliana ny fangatahan’ny mpanabe izay mitokona dia ho ezahina hampidirana amin’ny tetibolam-panjakana rehefa tonga eo amin’ny fitondrana izy.
‹ FIVAROTANA TRONDRO ENY AN-KALAMANJANA: Maimaim-poana fahazoana alàlana	› FITAKIAN’NY MPAMPIANATRA: Tsy ho voavahan’ny fitondram-panjakana